जेम्स गेरफील्ड, तथ्य र संक्षिप्त जीवनी
जेम्स गेरफील्ड। हल्टन अभिलेख / गेट छविहरू
जन्मे: नोभेम्बर 1 9, 1831, ओरेन्ज टाउनशिप, ओहियो।
डिहाईएको: 49 बर्षको उमेरमा सेप्टेम्बर 1981 मा, एल्बबोन, न्यू जर्सीमा।
राष्ट्रपति गारफील्ड2जुलाई, 1881 मा एक हत्यारो द्वारा गोली मारिएको थियो र कहिल्यै पनि आफ्नो चोटबाट बरामद गरेन।
राष्ट्रपति पद: मार्च 4, 1881 - सेप्टेम्बर 1 9, 1881।
गारफील्डको पदको रूपमा राष्ट्रपतिले केवल6महिनाको प्रायोजन गरे, र उनको आधा भाग उनको चोटबाट हटाइयो। राष्ट्रपतिको रूपमा उनको पद इतिहासमा दोस्रो सबैभन्दा कम थियो; केवल एक महिना सेवा गर्ने विलियम हेनरी हैरिसन , कम समय बिताउन राष्ट्रपतिको रूपमा।
प्रतिबद्धताहरू: गारफील्डको कुनै पनि राष्ट्रपतिको उपलब्धिमा कुरा गर्न गाह्रो छ, किनकि उनले राष्ट्रपतिको रूपमा धेरै समय बिताए। तथापि, के गरे, एक एजेन्डा जो उनको उत्तराधिकारी, चेस्टर एलन आर्थर पछि लागे।
गेरफील्डको एक विशेष लक्ष्य जसो आर्थर सम्पन्न भयो सिविल सेवाको सुधार थियो, जो अझै पनि स्पोइल सिस्टमले एन्ड्रयू जैक्सनको समयको सम्बन्धमा असर पारेको थियो।
द्वारा समर्थित: गारफील्डले 1850 को दशकमा रिपब्लिकन पार्टीमा सामेल हुनुभयो र उनीहरूको बाँकी जीवनको लागि एक रिपब्लिकन बने। पार्टी भित्रको उनको लोकप्रियताले उनलाई 1880 मा पार्टीको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको लागि एक उम्मेद्वार मानिंदै गयो, यद्यपि गारफील्डले सक्रिय रूपमा नामांकनको पूर्ति गरेनन्।
द्वारा विरोध: उनको राजनीतिक क्यारियर गारफील्डको विरोधमा डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्यहरु द्वारा विरोध भएको थियो।
राष्ट्रपति अभियान: गारफील्डको एक राष्ट्रपतिको अभियान 1880 मा डेमोक्रेटिक को उम्मेदवार विनफील्ड स्कट हानकको विरुद्ध थियो। यद्यपि गारफील्डले लोकप्रिय मतदान जितेकी थिइन्, उनले सजिलै चुनावको मत जिते।
दुवै उम्मेद्वारहरूले गृहयुद्धमा सेवा गरिरहेका थिए र गारफील्डका समर्थकहरू ह्याककको आक्रमण गर्न इच्छुक थिएनन् किनभने उनी गेटिस्बर्गको युद्धमा एक जना नायक थिए।
हानकोक समर्थकहरूले गारोफील्डलाई रिपब्लिकन पार्टीमा भ्रष्टाचारको लागि उडिसेन्स एस ग्रन्टको प्रशासनमा फर्कन खोजे, तर सफल भएनन्। अभियान विशेष रूप देखि जीवंत नहीं था, र गारफील्ड अनिवार्य रूप देखि ईमानदारी र कडा काम को लागि आफ्नो प्रतिष्ठा को आधार मा जीता, र उनको युद्ध युद्ध मा प्रतिष्ठित रेकर्ड।
पति र परिवार: गारफील्डले लुटेरेनिया रुडोल्फलाई 11 नोभेम्बर, 1858 मा विवाह गरे। उनीहरूका पाँच छोरा र दुई छोरी थिए।
शिक्षा: गारफील्डले बच्चाको रूपमा एक गाँउ विद्यालयमा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्यो। तिनको किशोरमा उनले नाविक बन्नको विचारमा चिन्ता गरे र घर छोटो छोडे तर चाँडै फर्किए। उनले ओहियोको एक सेमेन्टमा प्रवेश गरे, आफ्नो शिक्षालाई समर्थन गर्न अजीब काम गर्दै।
गारफील्ड एक राम्रो विद्यार्थीमा गएर भर्खरै कलेज भर्नुभयो, जहाँ तिनले लैटिन र युनानीको चुनौतीपूर्ण विषयहरू लिइन्। मध्य 1850 सम्म उहाँ ओहियोको पश्चिमी रिजर्व एक्लेक्टिक संस्थानमा क्लासिकल भाषाका प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो (जसमा हिरम कलेज हुनुभयो)।
प्रारम्भिक क्यारियर: 1850 दशकको अन्तमा शिक्षण गर्दा गारफील्डले राजनीतिमा रुचि राखे र नयाँ रिपब्लिकन पार्टीमा सामेल भए। उनले पार्टीको लागि प्रचार गरे, स्टम्प भाषण दिए र दासत्व फैलाउने विरुद्ध बोल्दै।
ओहियो रिपब्लिकन पार्टीले उनलाई राज्य सेन्टेन्टको लागि दौडने नामाकरण गरे, र उनले नोभेम्बर 1859 मा चुनाव जिते। उनले दासत्वको विरुद्ध बोल्न जारी राखे, र 1860 मा गृहमन्त्री अब्राहम लिंकनको पछि लाग्दा गृहयुद्धको उत्साहजनक संघको समर्थन गरे। युद्धको कारणले।
सैन्य क्यामेरा: गारफील्डले ओहियोमा स्वैच्छिक रेजिमेन्टहरूको लागि सेनालाई बढाउन सहयोग पुर्यायो, र उनी रेग्मीको आदेशमा उपनिवेश बने। अनुशासनको रूपमा तिनले एक विद्यार्थीको रुपमा देखाए, उनले सैन्य रणनीतिको अध्ययन गरे र सैनिकहरूको कमान्डमा कुशल भए।
युद्ध मा प्रारम्भिक गारफील्ड केंटकी मा सेवा गरे र उनले शलोह को महत्वपूर्ण र धेरै खूनी युद्ध मा भाग लिया।
कांग्रेसका क्यारियर: 1862 मा सेना मा सेवा गर्दा, ओहियो मा फिर्ता गारफील्ड को समर्थकहरु लाई उनको नाम को प्रतिनिधि सभा मा सीट को दौडने को लागि नाम दिए। यद्यपि उनले यसको लागि प्रचार गरेनन्, उनी सजिलै चुनेका थिए, र यसैले कांग्रेसका रूपमा 18 वर्षको क्यारियर सुरु भयो।
गारफील्ड वास्तवमा कैपिटलबाट कांग्रेसका सबैभन्दा पहिलो पदको लागि अनुपस्थित थियो, किनभने उनी विभिन्न सैन्य पोस्टिंगमा सेवा गरिरहेका थिए। उनले 1863 को अन्त मा आफ्नो सैन्य आयोग को इस्तीफा दिए, र आफ्नो राजनीतिक कैरियर मा ध्यान केंद्रित गर्न को लागि शुरू गर्यो।
सिभिल युद्धमा ढिलाइ, गारफील्ड एक समयका लागि कांग्रेसमा रेडिकल रिपब्लिकनहरूसँग सम्बद्ध थियो, तर उनी बिस्तारै पुनर्निर्माण तिर आफ्नो विचारमा अझ बढी उदारवादी भए।
उनको लामो कांग्रेसका क्यारियरको दौडान गारफील्डले धेरै महत्त्वपूर्ण कमिटी पदहरू राखे, र उनले राष्ट्रको वित्तमा एक विशेष चासो लिए। यो केवल अनिच्छा थियो कि गारफील्डले 1880 मा राष्ट्रपति को लागी दौडने को लागि नामांकन स्वीकार गरे।
पछि कैरियर: राष्ट्रपति हुँदा मरेपछि गारफील्डले राष्ट्रपति पदका लागि क्यारियर गरेनन्।
असामान्य तथ्याङ्क: कलेजमा भर्खर विद्यार्थी विद्यार्थीको लागि शुरुवात शुरु गर्दा गारफील्डले कुनै पनि चुनाव गुमाएन जसमा उनी उम्मेद्वार हुन्थे।
मृत्यु र अंतिम संस्कार: 1881 को वसन्त मा, एक रिपब्लिकन पार्टी समर्थक थिए जो चार्ल्स गुइटाउ, एक सरकारी नौकरी देखि मना गरे पछि कट्टर भयो। उहाँले राष्ट्रपति गारफील्डको हत्या गर्ने निर्णय गर्नुभयो र उनीहरूको आचरणहरू ट्रयाक गर्न थाले।
जुलाई 2, 1881 मा, गारफील्ड वाशिंगटन, डीसीमा रेल स्टेशनमा थिए, बोल्ने सगाईको यात्रा गर्न रेल बोर्डमा आयोजना गर्ने योजना बनाइयो। ग्वाइटाउ, एक ठूलो कैलिबर रिलोल्भर संग सशस्त्र, गारफील्ड पछि आउनुभयो र उसलाई दुई पटक गोली हाल्छ, एक पल्ट हातमा र एक पटक पछि।
गारफील्डलाई व्हाइट हाउसमा लगाइयो, जहाँ ऊ बसमा बस्यो। उनको शरीरमा एक संक्रमण फैलिएको छ, सम्भवतः उनीहरूको पेटमा गोलीको खोजी गर्ने डाक्टरहरू द्वारा तीव्र हुन्छन् जुन बाँझ प्रक्रियाको प्रयोग गर्दैनन् जुन आधुनिक समयमा सामान्य हुनेछ।
सेप्टेम्बरको सुरुमा, ताजा हवाले उसको पुनरुत्थानको आशा गर्ने आशामा गारफील्ड न्यू जर्सी किनारामा रिसोर्टमा सारियो। परिवर्तनले सहयोग पुर्याएन, र त्यो सेप्टेम्बर 1981 मा मरे।
गारफील्डको शरीर फिर्ता वाशिंगटन पुग्यो। युएस कैपिटलको अवलोकन पछि उनको शरीर ओहियो को दफन गर्न लागिएको थियो।
लिगेसी: गारफील्डले त्यस्तो सानो समयको कार्यालयमा बिताएपछि, उनीहरूले बलियो विरासत छोड्नु भएन। यद्यपि, उनीहरूको पछि लागेका राष्ट्रपतिहरू द्वारा प्रशंसा गरिएको थियो, र उनीहरूको मृत्यु पछि नागरिक सेवा सुधारका केही विचारहरू सम्पादित गरियो।
कुन राष्ट्रपतिहरू रिपब्लिकन थिए?
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू कुनै राजनीतिक अनुभवको साथमा छैनन्
राष्ट्रपति पर्डन को नियम
अमेरिकी राष्ट्रपति र तिनीहरूका आरा
10 खतरा महासागर जीवन लाई
रोजर विलियम्स विश्वविद्यालय प्रवेश
नोर पौडेलमा प्रमुख देवता र देवीहरू
पहिलो प्रभावशाली प्रदर्शनी - 1874
पिशाच वास्तविक हो?
मेरो विचार पेटेंट योग्य छ भने मलाई थाहा छ?
Sappho र Alcaeus - Lyric कविता Lesbos देखि
पहिलो देवताहरूको वंशानुसार
राष्ट्रिय महिला अधिकार सम्मेलन
मेक्सिकन क्रांति: Zapata, Diaz र Madero
मेष महिलाहरु मा शुक्र
बौद्ध धर्म को चार नोबल सत्य
प्रदर्शनी छवि ग्यालरी: फ्रेडा Kahlo
ग्रिड प्रयोग गरी चित्रहरू चित्रण गर्दै र प्रतिलिपि गर्दै
अस्वीकारमा बाइबल पदहरू
सर्वश्रेष्ठ चार वर्ष स्नातक दर
पालतू जनावरहरूको लागि जर्मन नाम - हस्टिरेनमेन
शीर्ष5इनबोर्ड नौका $ 5,000 को लागि
मन्डारिन चिनियाँ सजावट संरचना
संगीतमा Cédez अभिव्यक्ति
समाजशास्त्र विज्ञान सिद्धान्तको अवलोकन
कसरि चीनी मा घरेलू वस्तुहरु को उच्चारण गर्न को लागि
कैसाब्लांकामा 12 प्रकारका प्रश्नहरू